एक दिन सबैले यो संसार छोडी जानै पर्छ, त्यसैले दुई दिने चोलामा धेरै लोभ लालच नगरेकै राम्रो पूरा पढ्नु होस । - Daily Lokmandu
रिस उठ्यो भन्दैमा महिला माथि झुक्केर कहिलै पनि यी २ शब्दको प्रयोग नगर्नुहोला ! जान्नु होस !!
‘नो ब्रा’ अभियान चलाएकी पप गायिका सुली नि*धन फेला परेकी छिन
म्याग्दीको खयर बराही क्षेत्रमा फेला पर्याे दूध कुण्ड
सम्पुर्ण नेपालीको लागि खुशीको खबर ! कुलमान भन्छन ,अब विश्वकै सस्तो बिजुली नेपालमा निकाल्छु !
नेपालको दु:खमा सधै साथ दिने जापानमाथि नै पर्यो ठुलो दु:ख : ४९ को मृ*त्यु, २०० घा’इते !
१९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार ६० हजार हेक्टर जमिन भारतले फिर्ता
यस्तो छ चिनियाँ राष्ट्रपतिले चढेको कार, मूल्य सुन्दा तपाई जिब्रो टोक्नु हुनेछ !!
दु:खद खबर:-दाइजोमा २ लाख नदिँदा नेपाली चेलीको भारतमा हत्या !
मुख्य पृष्ठ /रोचक/एक दिन सबैले यो संसार छोडी जानै पर्छ, त्यसैले दुई दिने चोलामा धेरै लोभ लालच नगरेकै राम्रो पूरा पढ्नु होस ।
एक दिन सबैले यो संसार छोडी जानै पर्छ, त्यसैले दुई दिने चोलामा धेरै लोभ लालच नगरेकै राम्रो पूरा पढ्नु होस ।
सबैको गन्तब्य यहि हो। लोभलाभ नगर्नु होला ! जीवन बदल्न यो लेख पढ्नुहोला हामि सबैलाई लाग्ने गर्छ कि मेरो यति धेरै सम्पत्ति छ , मेरो यस्तो चिनजान छ , मेरो यस्तो बलियो छोरा – छोरी वा आफन्त छन् । तर याद गरौँ त ! के हामीलाई हाम्रो मृत्यको समयमा इनले बचाउन सक्छन् ?
आखिर जीवन छोटो छ । जतिसुकै लोभ र लालच गरे पनि एक दिन मर्नु नै छ । प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल सँग के थिएन र ? पछिल्लो अवस्थामा मासु र रक्सि को सेवन अत्याधिक गर्ने लत बसेका प्रकाश को मृत्यु भएपछी अहिले प्रचण्ड पनि एक्लो बनेका छन् ।युद्धकालमा प्रचण्ड ले कतिका ज्यान लिए होलान् , कति लाई घरबार बीहीन बनाए होलान् तर आफ्नै छोराको पनि अकालमा मृत्यु हुन्छ भनेर सायद उनलाई सपनामा पनि बिश्वास थिएन होला ।
जब पशुपतिमा आफ्नो छोरालाई दागबत्ती दिंदा प्रचण्डको हात काम्यो र आँखा बाट आँशु का धारा बगे यसैले प्रमाणित गर्छ कि जीवन आखिर केहि पनि छैन । दिन का दिन पार्टी र मोज गर्ने अनि तरुनी र पैसाको लत ले मस्त भएको हरुको पनि मृत्यु समान नै हुने गर्दछ अनि अन्तीम स्थान पशुपतिनाथ नै बन्ने गर्दछ र सडकमा बसेर मागेर खानेको पनि अन्तीम स्थान भनेको पशुपतिनाथ नै हो ।
जब हामि मरेर जान्छौं , यो सम्पत्ति अनि नातागोता कुनै पनि काम लाग्दैन । न हामीलाई नातागोताले बचाउन सक्छ न त सम्पत्ति ले । त्यसैले नगरौं व्यर्थको अभिमान । नगरौं अभिमान मेरो सम्पत्ति छ र मेरो यस्तो नाता छ भनेर । जीवन छोटो छ केवल सत्कर्म गरौँ र सत्कर्म ले नै जीवनको सदुपयोग गरौँ
यो बिचार यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो त ? आफ्नो बिचार राख्नुहोस तथा कुरा चित्त बुझे एक एक शेयर गरेर साथ् दिनुहोस
बोली फुटेको छैन् भने बच्चालाई यो ठाउँमा लैजानुहोस् नबोल्ने बच्चा बोल्न थल्छन् आफु पनि जान्नुहोस् र शेयर गरेर अरुलाई पनि जानकारी दिनुहोस्
हिन्दु धर्ममा सबै भन्दा ठुलो मानिने नागदेवताको दर्शन गरि प्रेमलिला पढेमा सधै दिन राम्रो र नया जोश मिल्नेछ !
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ताप्लेजुङ पाथिभरा माताको उत्पत्ति
यिनै हुन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको एकमात्र छोरी सी मिंङजे, जो यति शक्तिशाली छन् !
सधै हसिलो मुहारकी कमला घिमिरे , किन भावुक बनिन् दशैंको दिनमा (हेर्नुस् भिडियो सहित )
यी ३ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तो सुकै दुखमा पनि दिन्छन् साथ , कुन कुन राशी हुन् ?
१५ तारेखमा लिंग पर्व मनाइन्छ । यसरी मनाइयो जापानमा अनौठो लिंग पर्व
प्रचण्डले भने : सबै त्यागेर फेरि जंगल जान तयार छुँ